Aw Muriidi: Qaraxii Titaatarka iyo qaraowgii doorashada 2021ka - Latest News Updates
Aw Muriidi: Qaraxii Titaatarka iyo qaraowgii doorashada 2021ka
Aw Muriidi wuxuu xilli barqo ah u dhaqaaqay dhinaca degaanka Aw Aweyska ee degmeda Xamarweyne isagoo gacanta haya canug yar oo uu awow u ahaa oo ku sii jeeday gurigooda oo ku yaallay meel aan ka fogeyn kawaanka Mallayga.
Luuq yar ooku yaallay xaafadda Koodka ayuu kula kulmay Aw-KALEELOW oo aad u careysan.
“Maxaa waaye, tiyaatarkii iyo gurigii hooyooyinka aas qarax ka dhacay..weliba labo qarax,inteey ka imaadeen …ma soo buubeen…meeshaas seey ku soo gaareen” ayuu yiri Kaleelow.
“Dooro haddii minanka ku xaarxaarto wax loo yeeli waaye” ayuu Aw Muriidi ku jawaabay.
“Waxaaba iiga sii daran ninka meeshaas ku baxay….Cawil Daaahir” ayuu sii raaciyey Aw-Muriidi.
Kaleelow oo xanaaq badani ka muuqdo oo wejiga ka duudaya ayaa sii raaciyey “Masaakiinta aas u gargaari jiray….waa ka naxay”.
Aw Muriidi iyo kaleelow markii ay sii dhaafayeen suuqa koodka ayey arkeen askar taag taagan oo wax baareysa, amrkaasey istaageem iyagoo fiirinaya wuxuuna kaleelow yiri” Waaba og yihiine , Xamarweyne, in aan weligiis qarax lagaheline…maxay ka wadaan…..reer nabadeed inaan nahay maa shaki ku jiraa”.
“Waa soco weynee aan orodno waaye….” Ayuu yiri Aw muriidi.
Aw Muriidi iyo kaleelow waxay gurigooda geeyeen canugii yaraa ee uu awowga u ahaa Aw Muriidi.
“Fadhiista..Gaxweeysta…fooobaxsina waa jiraa “ ayey Ay Ooto ku tiri labadii Oday, deris xariir ah oo wanaagtsana waa loo fidiyey.
Waa fariisteen wuxuu Aw Kaleelow yiri “ Aw Muriidreer nabadeed inaan nahay maa shaki ku jiraa”.
Waa fariisteen wuxuu Aw Kaleelow yiri “ Aw Muriidiyow waxaan rabaa in aan xisbi suubsado,,,,oo 2021-ka aan u tartamo madaxweyne…ka warran hee|.
Aw Muriidi oo yaaban ayaa ugu jawaabay”Saas maaba ayaamahaan guriga ooga soo bixi weyday….wixii soo wadid aa ka weyn…”
“Yaa noo diidi.. Unnuka…waa suubsa karnaa…” ayuu hadana kaleelow ku qeyliyey.
“Ogaaw hee, aniga maanta ka bacdi waa kaa heraa..ma kula soco kari…..baabuur bilindaato(Buruuf) soo gao hee …..Mukulaal madowyaalna sameyso,,,,,”.
Sidii loo hadlayey Aw Muriidi waa gam’ay , Aay Oota iyada dubistii bunka ayey guda gashay…mar keliya “’’’Buushhhhhhhhh’ ay ka yeeratay dabkii, bunkii iyo saliiddii dhexdooda.
Aw muriidi wuuu riyoonayaa wuxuu ku riyoonaa isagoo ag fadhiya Aw Musbaax oo alaabo yar yar sida tufaaxa …cambaha, iyo waxyaabo gasacadeysan oo laga keeno ku gada Via Rooma ,,,Waxaa la soo ag dhigay gaari Saarif ah ..ma yaqaanaan cidda wadata waana laga degay intii ay sheekeysanayeen.
Aw Muriidi waa yara cabsooday laakiin uma sheegin Musbaax oo la hadlayey labo wiil iyo gabar oo dhallinyaro ah oo wada socday oo tufaax ka gorgorinayey.
Mar keliya ayey maqleen shanqar wyn , jug iyo boor is xiga …….Aw Muriidi waa qeyliyey ….Aay Ooto ayaa ku baraarugtay qeylidiisa iyadoo leh “ Maxaas nooga nixihaaa…..Muriidi saan lee mii…….Shib oo dheh”.
Muriidii jiifkii ayaa laga kiciyey isagoo neef tuuraya ayuuna yiri “ Waxaan ku riyooday..anigoo saneystay xisbiga Talowadaag…is soo sharraxay…magaalada Xamar, Marko , baraawe, Baydhbo..meelo badan liiga taageeray…doorasho la galay….musharixiin is keeneen oo weliba aad u badan waxaan ka kasaa Xuseen Ceydiid, sheikh sharif , Xasan Sheekh Maxamud, C/raxmaan C/shakuur iyo kuwo kale….waa la coddeeyi..tii xuldhibaanada ma aha …shacabkaa codeeyi ..meel walba waa laga soo baxay…..natiijada waxay noqotay..Aw Muriidi waa loo codeeyey….Aw Muriidi waa loo codeeyey….meel walba waa lii codeeyey….Markii gacanta lii qabtay ee kitaabka lii saaray ….aan ooyey….waxaan iri suga suga …kkudbad yar aan akhrinaa,,runtaan sheegaa,,,,waxaan dhahay aniga doorashadaan xaq ma ku helin……dadka iyo dalka waa qiyaanay….laaluush leen wax ku helay ….lacag lee codka leeygu siiyey…iga dhaafa ma dhaaro kari,,,,Madaxweyne ma naqa kari.
Waxaa Qoray: Mohamed Shiil